I-XYZtoCAD, umsebenzi uqhagamshelanisa ne-AutoCAD-Geofumadas
I-XYZtoCAD, umsebenzi uqhagamshelanisa ne-AutoCAD
NgoFebruwari, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Topography, yokuzonwabisa
I-AutoCAD yedwa ayifaki iimpawu ezininzi zokusingatha izilungiso okanye ukudala amatafula ukusuka kumaphuzu. I-3D yoLuntu yenzayo, kodwa ingcaciso engundoqo ayikho, kwaye ke ngoko xa siya kusebenza ukulungelelaniswa okwenziwe kwisikhululo esipheleleyo, i-GPS okanye isigxina ngaphandle kufuneka sisebenzise kwi-macros amanzi apho.
Kodwa XYZtoCAD ayilo macro elula, kuba sisixhobo eyakhelwe umsebenzi logic, kukho amalungiselelo okukhetha ukuba yokuphuculwa intanethi. Yintoni eyenzekayo kukuba umntu akhululeke lula izakhono zabo, kula maxesha ukuba opensource kungcono ngaphezu indawo kwegama layo.
I-executable ikhutshwe kwiprogramacionautocad.com, kwaye iyenziwa kwaye incediswa. Ekugqibeleni, ibuza ngathi yiyiphi i-AutoCAD ukufakela esiyifunayo. Kwezinye iimeko, isinyathelo sokugqibela asenzeki, kwaye ngokuqhelekileyo ngenxa yokuba nelayisenisi engafanelekanga kwi-registry registry -okanye uphonywe, njengoko ufuna ukuyibiza-
Xa kukho iingxaki zokufakela, abahlobo beCADnet bacebise oku kulandelayo:
1 Vula AutoCAD
2 Ubhala kumgca womyalelo: umnxeba uze ungene
I-AutoCAD 2010 -2011 khetha ifayile
I-AutoCAD 2007-2008 -2009 khetha ifayile
Njengoko sibona, esi sixhobo isebenza iinguqulelo ukusuka 2007 ukuya 2011 AutoCAD yaye nakhelwe ndawonye .NET uyakwazi ukuqwalasela ukuba naye unokubalekela ngaphakathi kwi AutoCAD 2012 xa isibini kweenyanga baya kukhululwa.
Thatha eli thuba kukuxelela ukuba unokuzikhuphela kwi-AutoCAD 2012 mahhala, ukusuka esi sixhobo, ngoku u-beta ngenjongo yokuvavanya, kufuneka ubhalise.
Cwangcisa imenyu ye-XYZtoCAD
Emva kokufakiwe, isebenze kumgca womyalelo wokungena
Xa ungena, imenyu emitsha njengaleyo eboniswe kumfanekiso ifanele ibonakale kwibha engaphezulu.
Xa sisafuni ukubona imenyu, ayinakwenziwa ngumyalelo
Kusenokwenzeka ukuba xa ufaka inguqulo sele sele isitsha, ingahlaziywa ngokusebenzisa umyalelo
Ukungenisa iikhowudi ze-Excel
Kule ndlela le sicelo isebenza ezimangalisayo kwipaneli elula. Ifayile ye-txt iyonyulwa, umyalelo apho idatha ikhona, ukuba ufuna ukubeka amaphulo okanye iibhloko. Ubukhulu bepaji, ugcino apho baya kugcinwa kwaye balungele.
Intlonelo yam kubahlobo beCADnet.es ukuba le nto yokudlala idityanisiwe.
Kukho amaqhosha engabonakali ukuba akhona, afana nokubukela idatha, ekuvumela ukuba ukhangele phambili kwitheyibhile elithunyelwayo. Kwakhona ukhetho lokukhetha ifomati yefayili ukusuka kwikho ekhoyo.
Kwaye emva kokuba ukhwelise amaphuzu, iqhosha livuliwe ukuvelisa itafile. Ifuna ndithi kuni na indawo ikona yasekhohlo ephezulu, wamkela style itafile ivelisa eziliqela xa zininzi (amanqaku 100 kwiphepha ngalinye) kunye nqakraza ivelisa kwitheyibhile kubandakanywa i-ID, easting, northing, ukuphakama engile ukuze ngongoma elandelayo. Kukhulu ukucinga kwakhona, nangona ndinokubhaliweyo malunga nokusetyenziswa kwelo kota yengqungquthela.
Ukuthumela ngaphandle kubonisa i-txt
Kwindlela eyahlukileyo, kuyafana. Inokukhethwa kwiibhloko okanye amanqaku, ukusuka kwi umaleko okanye ukhetho lwamaziko. Emva koko simele sitsho indlela esifuna ukuyihlula ngayo, inani leenqununu, apho ifayile ye-txt iya kugcinwa kwaye ilungele.
Ngokuqinisekileyo, ifayile txt iya kuvulwa ne-Excel, nto kodwa ukusuka umkhangeli zincwadi, kodwa abangena Excel kunye nokukhetha zonke iifayile. Emva koko umncedisi uthatha isinyathelo ngeenyawo ade iboniswe njengetafile. Kanye table asindiswe njengoko comma-ahlukane okanye tab, nangononophelo ophezu iphepha lokuqala kwaye akukho iiseli edityanisiweyo okanye izinto itekisi ephakathi inqabile.
Ndibethelwa iqhosha elikuvumela ukuba umise inkqubo, isenzo esinokubakho xa usebenza kunye nenani elikhulu kakhulu lamaphupha okanye ukuba isenzo sixhomeke.
Ewe, kukho. Eyona nto ibonayo ndiyifumene kwizicelo zamahhala zokuhlola usebenzisa i-AutoCAD.
Apha ungabona ividiyo elayishwe kwi-YouTube.
Post edlulileyo«Edlulileyo gvSIG Fonsagua, i-SIG yokuyila kwamanzi
Post Next AutoCAD 2012 Nini?Okulandelayo "
Iimpendulo ze-8 "XYZtoCAD, umsebenzi uqhagamshelanisa ne-AutoCAD"
Andiyazi ukuba eso sicelo sisebenza kwi-AutoCAD 2013
Ndifake i-AutoCAD Civil 3D 2013, landela uqeqesho kodwa andinayo iziphumo ezilungileyo. Ndiya kuqonda ukuba unokundixelela indlela endiyenza ngayo i-XyzToCad. Ndiyabonga
Le Nkqubo NGOKUGQWESILEYO IKHADI entle kakhulu kuba sisixhobo esiluncedo KAKHULU, KODWA ndinengxaki ngeebhloko ABANYE ofuna ukuzithumela neempawu ndifumana le imposiso ngxoxo echaziwe ephuma uluhlu lwamaxabiso elisebenzayo, njengoko ukuze ukulungisa le
Ngoku unokukhuphela i-XyzToCad v.2a
I-01-Izicelo zokuthumela iimpahla kwiDefayile ye-Excel, iTxt, Xml, Html.
I-02-Isicelo sokuPhathwa kweeDatha kwi-Excel okanye kwiFayile yeTxt.
03-Akuyimfuneko ukuba u-Excel efakwe kumatshini womsebenzisi.
I-04-Ikuvumela ukuba uthumele zonke iibhloko ezikuluhlu lwakho lweempawu.
I-05-Ivumela ukuba ungenise inani elikhulu leempawu (i-ID, Inkcazelo, iZ, njl njl.
I-06-Bonisa iSikimu seNgcambu seNkqubo yokuCima.
I-07-Yenza iThebhile ilungiselelwe ngesakhiwo sebhloko.
+ IiVideos XyztoCad v.2a
Kakuhle. Enkosi ngokucaciswa malunga nokufakwa.
Ukuphuculwa kwexesha elizayo kubonakala kum inxaxheba enkulu.
Ayizukuba mbi ukuba babona ukhetho lokwakha i-polygonal. Kuthetha ukuba, yongeza i-pline command, eyenza i-polyline ngokulandelelana kwamanqaku. Sisidingo esivakalayo kakhulu, nangona singasebenzi xa oko unalo lilifu lamanqaku angaphakathi kodwa ewe, ekusebenziseni abanye abantu baya kunika esi sicelo ukuzoba umda weP polygonal.
Ukuba kukho ingxaki nge-wizard yokufaka, inokwenziwa ngesandla, kule POST ilandelayo ibonisiwe
Ngokubhekiselele kwinqanaba, kwinqanaba elityathwayo, kuyinyaniso
ezingenasidingo, idatha iyasebenza kwiibhloko. (Iya kuguqulwa kwinguqu elandelayo).
Ngokuphathelele ukuphuculwa kwenguqu elandelayo zilandelayo.
-Ukuthumela idatha kwi-Excel Sheet ngokuthe ngqo (Akukho mfuneko yokuba ne-Excel ifakwe kwi khomputha)
-Ukuthumela kwi-Excel kunye ne-HTML
-Chukumisa kwiDatha ifomu lokungenisa.
Ukubulisa kunye NAMANYE! le nqaku.